ESI EMEGHE FAỊLỤ PPTX: USORO NDỊ A MA AMA - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Esi emeghe faịlụ PPTX
Mmepe nke teknụzụ ọmụma chọrọ ịmepụta usoro mgbasa ozi ọhụụ ọhụrụ, ijikọta ngwa-ọma, na-echefu echefu, ederede ederede, mmegharị ma ọ bụ obere mgbagha, ọdịyo na vidiyo. Maka oge mbụ, a doziri nsogbu ndị a site na iji usoro PPT. Mgbe ntọhapụ nke MS 2007, a na-edochi ya na PPTX arụ ọrụ, nke ka na-eji emepụta ngosi. Anyị ga-agwa gị otu esi emeghe faịlụ PPTX maka ịlele ma dezie.
Kedu ihe bụ PPTX na gịnị maka ya?
Esi emeghe PPTX
Igosipụta Ụlọ Ọrụ
Nzọụkwụ mbụ maka ihe ngosi nke oge a bụ na 1984. Afọ atọ ka nke ahụ gasịrị, a tọhapụrụ PowerPoint 1.0 maka Apple Macintosh na -eme oji na oji. N'otu afọ ahụ, Microsoft nwetara ikike maka mmemme ahụ, na 1990, a na-etinye akwụkwọ ọhụrụ ahụ na ụlọ ọrụ isi ọrụ, ọ bụ ezie na ikike ya dị oke njedebe. Mgbe ọtụtụ ọganihu ndị ọzọ gasịrị, n'afọ 2007, e webatara ụwa na PPTX, nke nwere ihe ndị a:
A na-enye ozi a n'ụdị nke ibe nke ibe, nke ọ bụla nwere ike ịnwe ederede na / ma ọ bụ faịlụ multimedia;
a na - atụ aro ịkọpụta algorithms maka ederede ihe oyiyi na ihe oyiyi; a na - ewukwasị ngwa maka iji ihe osise na ihe ọmụma ndị ọzọ;
ihe ntaneti nile jikotara n'otù uzo, nwee usoro doro anya, enwere ike igbakwunye na ndetu na ndetu;
ọ ga-ekwe omume iji mee ka mmịgharị slide, setịpụ oge maka igosipụta ihe ngosi ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla;
A na-ekewapụta ihe maka ederede na ịlele akwụkwọ maka ọrụ dị mfe.
A na-eji usoro ọkwa PPTX mee ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, na nzukọ azụmahịa na n'ọnọdụ ọ bụla mgbe visibiliti na ozi dị mgbagwoju anya dị mkpa.
N'iji nkwupụta, ị nwere ike ikwu okwu mkpirikpi na nkọwa maka ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ.
Ozugbo faịlụ ọ bụla na-aghọ ihe a ma ama, ọtụtụ mmemme na ngwa gosipụtara na ha nwere ike ịrụ ọrụ na ya. Ha niile nwere ọdịiche na ike dị iche iche, ya mere ọ dịghị mfe ịme nhọrọ ziri ezi.
Usoro kachasị ewu ewu maka mmemme ọrụ na-anọgide na PowerPoint. O nwere ikike dị ukwuu maka ịmepụta, edezi ma gosipụta faịlụ, mana akwụ ụgwọ ya, yana maka ịrụ ọrụ ngwa ngwa ọ chọrọ ike dị elu nke ngwaike PC.
Na Microsoft PowerPoint, ị nwere ike ịmepụta ngosi mara mma na-akpali mmasị ntụgharị na mmetụta.
Maka ndị ọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka na gam akporo os, a rụpụtara arụmọrụ free nke PowerPoint n'ụzọ dị ntakịrị.
Ime ngosi dị mfe ọbụna na ngwaọrụ mkpanaka.
OpenOffice ngwanrọ ngwanrọ, nke e mepụtara maka Linux, dị ugbu a maka usoro ntanetị niile. Ihe bụ isi bụ nkesa n'efu nke mmemme, ya bụ, kpamkpam n'efu, ọ bụghị ịchọrọ ikikere na igodo ọrụ. Iji mepụta ngosi, OpenOffice Impress na-eji ya, ọ na-enwe ike imeghe ngosi ndị e mere na mmemme ndị ọzọ, gụnyere ụdị PPT na PPTX, na ikike idezi.
Ọrụ nrụrụ nwere ike ịsọ mpi na PowerPoint. Ndị ọrụ na-edepụta obere ọnụọgụ nke ụdị ndebiri ndị a na-ahọpụta, mana enwere ike ịbudata ya site na Weebụ. Na mgbakwunye, usoro ihe a dị maka iji tọghata mmemme na usoro SWF, nke pụtara na kọmputa ọ bụla nke Adobe Flash ọkpụkpọ nwere ike ịrụ ha.
Mmetụta dị n'ime OpenOffice ngwugwu ngwanrọ.
Ihe ngwọta kachasị mma maka ndị nwe ochie na ndị nwere ike iji nwayọọ nwayọọ rụọ ọrụ bụ PPTX Viewer 2.0, nke enwere ike ibudata n'efu na saịtị ọrụ. The faịlụ nwụnye na-ele naanị 11 MB, interface ngwa ngwa dị mfe ma dị omimi.
Dị ka aha ahụ pụtara, PPTX Viewer 2.0 bụ naanị maka ịlele ngosi, ya bụ, enweghị ike iji ha dezie ha. Otú ọ dị, onye ọrụ ahụ nwere ike ịbaa akwụkwọ ahụ, gbanwee oghere elere anya, bipụta ihe ngosi, ma ọ bụ ziga ya site na e-mail.
Ihe omume ahụ bụ n'efu ma dị maka nbudata na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Ngwa a bụ akụkụ nke ngwanrọ software WPS Office 10 nke a kwụrụ ụgwọ, atụmatụ njirimara enyi-enyi, ọrụ dị ukwuu na ọtụtụ ndebiri na-egbuke egbuke. E jiri ya tụnyere mmemme sitere n'aka Microsoft, WPS Office nwere ike inye ọrụ ngwa ngwa ma nwekwuo ike, ikike iji hazie atụmatụ nke windo arụ ọrụ.
Usoro ihe omume a nwere ngwaọrụ maka ịmepụta ma na-elele ngosi.
Enwere nsụgharị nke WPS Office maka nyocha niile na-ewu ewu. Na nnwere onwe free, ị nwere ike ịlele ọrụ nhazi nke PPTX na faịlụ ndị ọzọ; a na-enye ngwá ọrụ ọrụ maka ego ọzọ.
Na ngosipụta nke Kingsoft Presentation, e nwere ngwaọrụ ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ ngosi, ị ga-akwụ ụgwọ maka atụmatụ ndị ọzọ
Ngwa ọzọ sitere na ngwanrọ ngwanrọ ọrụ ọzọ. N'oge a, "mgbawa" ya bụ ọrụ dị iche iche nke multimedia - mgbagwoju anya dị, nkwado maka ngosipụta na mkpebi nke 4K na elu.
N'agbanyeghi ihe eji eme ihe nke ngwa oru, o di mfe iji ya. Akpokọtara akara ngosi niile dị na otu taabụ, ya mere, n'oge ọrụ, ị anaghị agbanwe mgbe ọ bụla n'etiti menus dị iche iche.
Igosipụta Ụlọ Ọrụ Ịdịmma na-enye gị ohere ịme ihe ngosi na mmegharị ọsọ ọsọ.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e jiriwo teknụzụ ígwé ojii kpuchie software nke ọma maka ịmepụta, nhazi na ịchekwa data. Ihe ngosi PPTX, nke ọtụtụ ntanetị nwere ike ịrụ ọrụ, ọ bụghị otu.
Ndị kasị ewu ewu nke ndị a bụ Microsoft's PowerPoint Online. Ọrụ ahụ dị mfe ma dị mfe, n'ọtụtụ ụzọ dị ka mgbakọ na-anọchi anya nke usoro ihe omume ndị ọhụrụ. Ịnwere ike ịchekwa ihe ngosi ahụ e kere eke ma na PC na igwe ojii OneDrive mgbe ị mepụtara akaụntụ kwekọrọ.
Ị nwere ike ịchekwa nkwupụta ma na kọmpụta na igwe ojii OneDrive.
Onye na-asọmpi kachasị mma bụ ọrụ ngosi Google, akụkụ nke ngwa ngwa Google Docs. Isi uru nke saịtị ahụ bụ mfe na nnukwu ọsọ. N'ezie, enweghị akaụntụ ebe a ezughị.
Iji rụọ ọrụ na ngosi na Google, ị ga-achọ otu akaụntụ.
Anyị na-atụ anya na anyị jisiri ike ịza ajụjụ niile ị ga-agwụ ike. Ọ na-anọgide na ịhọrọ usoro ihe omume, ọnọdụ eji ya na arụmọrụ ya ga-adaba na ihe ị chọrọ.